Baaq Ku Wajahan Dowladda Iyo Shicibka Somaliland….W/Q Rashiid Sulub Caalin | Somaliland Today
← Taladii Talyanle Tebeyey , W/Q: Cali Cabdi Coomay
Baaq Ku Wajahan Dowladda Iyo Shicibka Somaliland….W/Q Rashiid Sulub Caalin
Anigoo ah Haldoor Rashiid Sulub Caalin, oo had iyo jeer la iiga bartay in aan ka shaqeeyo danta guud iyo kolba halka aan is leeyahay way ka liicsan tahay, ayaa waxaan baaqan ugu talo-galay in aan kaga hadlo qaddiyad masuuliyadeedu ay ina wada saaran tahay, oo ay muhiim tahay in laga wada tashado, kuna qasbanahay in aynaan waxba ula hadhin.
Markaan arkay:- Xaaladaha Cakiran ee Shaqo iyo Xirfad la’aaneed ee ka jirta dhamaan ilaha Udub dhexaadka u ah
horumarka iyo Dhaqaalaheena sida Warshadaha, Wax-soo-saarka, qalabka guud ahaan sida Gaadiidka yar yare ee cusub, Gadiidka waa weyn, Maraakiibta, Diyaaradaha, Qalabka Dhismaha ee casriga ah, korontada, qalabka Caafimaadka, Isgaadhsiinta I.W.M. qalabkaas oo dhammaan u dhutinaya in la helo Muwaadiniin Xirfadlayaal ah oo heer sare iyo heer dhexe ah oo ka shaqeeya qalabkaasi IWM.
Markaan arkay:- in Xirfadlayaashii hore ee Dowladihii hore ay waxbareyn ay noqdeen wax dhintay, wax hawl gabay iyo wax dhoofay, mid-midka soo hadhayna la kala jiidanayo.
Markaan arkay:- Xirfadlayaal ajanabi ah oo Waddanka ku soo qul-qulaya oo inagu kacaya Qiimo xoog leh, oo loo soo kaxaystay sidii ay u buuxin lahaayeen kaalinta ay gabeyn Muwaadiniintu.
Markaan darsay:- Xaqiiqada taagan ee ah, in aynaan waqti u helin rubuc-qarnigii tagay ee aynu soo dhaafnay sidii aynu u soo saari lahayn Xirfadlayaal cusub oo la jaanqaadi karaya korodhka iyo horumarka uu Waddanku ku talaabsanayey, iyadoo muhiimada ugu weyn aynu siinay dhisidii Haykalka Dowladnimo iyo dhisiddii Nabada Galyada. Taasi oo aan imika Canaan iyo qoomamotoona ka taagneyn
Markaan darsay:- Xaqiiqooyinka iyo waaqaca jira ee aynu ku buuxin karno baahida xirad-la’aaneed ee Waddanka ka jirta imika, taasi oo inagu qaadan karta 10 Sannadood oo dambe qiyaastii, oo ay u baahan tahay qorshe dhamaystiran iyo dhaqaale iyo Maalgashi xoog leh oo hawshaas lagaga midho dhalin karayo,laakina ay inoo banantahay oo kaliya in la sameeyo short cut xagga wakhiga iyo Maalgashiga.
Markaan garawsaday:- Xaqiiqda ah in uu inaga ragay Aqoonsigii aynu ku kasban lahayn kaalmooyin Gacan Shisheeye oo wax ku ool ah amma Daymo Caalamiya ah oo aynu helno oo lagu maalgaliyo Shaqo abuur iyo sidii loo tabarbari lahaa Xirfadlayaal cusub. Arrimahaasi oo qaddar Alle ku xidhan oo aynaan yaraysanin.
Markaan cuskadey:- Maahmahyada qiimaha leh ee odhanaya ‘kolba sidii loo jabo ayaa loo dhutiya iyo Dani waa seeto amma odhaahda kale ee ajnabiga ah ‘Boqolkiiba 10% ama 5 % oo aad wax qabab ahi waxay dhaanta boqolkiiba boqol oo waxba la’aan ah’.
Markaan yaqiinsaday:- Haddii Barnaamijkan si fiican loo fuliyo amma 80% la qabto uu wax badan inaga kafeyn karayo oo ah soo-sarita Shaqaleh Xirfad leh iyo shaqo abuurba, isla markaana ku kalsoon in baahi weyn uu inaga dabooli doono.
Markaan Garowsadey: In Waajib Muqadis ah ay igu tahay sida Muwaadin walba oo Reer S/L ahin layimado marwalba U HEELANAN DANTEENA GUUD AF,GACAN,FAKIR,iyo XOOGBA.ayan Qorshahan wax-ku oolka ila ah idiin soo bandhigo:-
1. In shicib iyo Dowladba gacmaha la isku qabsado sidii loo samayn lahaa barnaamij dhamaystiran oo 3 sanno ah oo ku wajahan sidii loo saari lahaa xirfadlayaal la isku halleyn karo, oo buuxin kara kaalmaha banaan. Taasi oo lagu heli karo, in marka xirfadlayaal Ajanabi ah Dibadda laga keeno inta ay shaqo maalmeedkooda ku jiraan in lagu lamaaneeyo Wiil iyo Gabadh Reer S/L ah kolba sida ay duruufuhu u samaxayan ka hoos shaqeeya oo ka faa’iidaysta,,Aqoontooda,Waya’aragnimo ay leeyihiin kuwan Ajanabiga ah si aan mar dambe loogu baahan kuweenanini ay u buuxiyan meelo kale oo ay baahi ka jirto .
2. In Dhalinyarada Xirafadlayaasha ee cusub ee wax baratay iyagana lagu lamaaneeyo marka ay shaqo galan dhalin kale oo ka sii fa’ideysta Barnaamigkaasina uu sidaasi uun Aqoonta farsamo la isku sii kalo dhaxlo uu uu noqo mid muddo 5 sanno socda oo dhaliaya midho badan ,oo maamulkiisana daacadnimo,iyo dadaal xoog leh la yimado.
3. Barnaamijkaa qorshayntiisa iyo fulintiisa waxaan ku talinayaa soona jeedinayaa in ay iska kashadan dhaman cida lug iyo taloba ku yeelan kara.
4. In dhalinyarada lagu lamaaneynayo xirfadlayaasha Ajanabiga ah la sii diyaargareyo muddo 3 bilood hortood ah, iyadoo lagu xisaabtamayo Goboladda ay ka yimaadeen, Da’dooda iyo Heerka Tacliintooda, Dhaqankooda iyo Asluubtooda iyo dhammaan shuruudaha looga baahan yahay, iyadoo muhiimad gaar ah la siinayo beelaha laga tirada badan yahay.
5. In Dawalda danbe ee Doorashooyinka Dalkena ka dhacaya Sanadkan akhrikiisa ay ahmiyada kowaad siiso SAMEYNTA SANDUUQ MAALIYADEED OO LAGU URURIYO LACAGTA BARNAAMIJKAN KOR KU XUSAN LAGA BADHI TAAGEERO,IYO IN QALAB WAX LAGU BARO FARSAMAYAQANIIN KALE IYO KHARSHKA MACALIMIINTA IYO MAMUUULKA LAGU BIXIYO.
Anigoo aminsan in labadan Barnaamij ay noqon karan kuwo Dawo u yeelan kara Dhibta jirta ee kor ku soo sheegay,waxan ku soo gunaanaya in ALLEH taladeena toosan inagu hogamiyo.
F.G.1. Kuma talinayo mana soo jeedin in uu Barmijkani yahay ka kaliya ee ujeeda kor ku xusan midho ka dhalin kara ee Wax-garadkeenu & Aqoonyahanadeenu waxa ay la iman karayan ama soo diyaarin karan mid kalo la mid ah,amaba kaba qaayo badan ee fulinta iyo wax-ka qabad dhibta jirta ay muhiimadu tahay.
2.In Dayarta Xiradaha la barayo Wakhtigan xadirka ka fursaneyn in Gunno la siiya ,taasi oo tahay Dhaqan inagu cusub oo dhibtiisa leh ah,oo qofkii wax barayanaya aduunka kale hadan lacag la weydiinin uu san helin Gunno!
HALDOOR.Rashid Sulub Caalin Hargeysa S/L E-mail sulub2007@yahoo.com Tel.Tel.0634426761 iyo